Showing results for tags '@bc.game coco'. - BC.Game Forum - A Cryptocurrency and Gaming Community
Showing results for tags '@bc.game coco'.
@bc.game coco Help wanted do what you can
Dutchieboi postedatopic in Introduce Yourself
Black Tiger postedatopic in Myanmar
General Event Contest War start Date-8.3.2021 End Date-15.3.2021 For our Myanmar players, please submitacontest daily result withascreen shoot Bonus will be given to the 13 most vulnerable people First Prize - $ 15 Second Prize - $ 10 Third Prize - $5I will pay up to2$ 10 players General Event Contest War Start Date-8.3.2021 End Date-15.3.2021 ထို (၇)အတွင်း မိမိကစားထားသော Warger ကို screen shoot ရိုက်၍ ယခုပို့စ်အောက်မှာ မန့်ပေးပါ warger အမြင့်ဆုံး ၁၃ ယောက်ကို ရွေးချယ်ဆုပေးသွားပါမည် ပထမဆု-15$ ဒုတိယဆု-10$ တတိယဆု-5$နှင့် နှင့်2$ 10 ဦးကို ရွေးချယ် ဆုပေးသွားပါမည် Note(Pelse don't use multi account and fake Screen shoot)
Happy new year😘😘😘😘2021
Black Tiger postedatopic in Introduce Yourself
May the New Year be full of success and happiness
General Event Contest War start Date-23.2.2021 End Date-2.3.2021 For our Myanmar players, please submitacontest daily result withascreen shoot Bonus will be given to the 13 most vulnerable people First Prize - $ 15 Second Prize - $ 10 Third Prize - $5I will pay up to2$ 10 players General Event Contest War Start Date-23.2.2021 End Date-2.3.2021 ထို (၇)အတွင်း မိမိကစားထားသော Warger ကို screen shoot ရိုက်၍ ယခုပို့စ်အောက်မှာ မန့်ပေးပါ warger အမြင့်ဆုံး ၁၃ ယောက်ကို ရွေးချယ်ဆုပေးသွားပါမည် ပထမဆု-15$ ဒုတိယဆု-10$ တတိယဆု-5$နှင့် နှင့်2$ 10 ဦးကို ရွေးချယ် ဆုပေးသွားပါမည် Note(Pelse don't use multi account and fake Screen shoot)
Baccarat (How to play baccarat)
Baccarat is comparing card game played between two hands, the "player" and the "banker" Each baccarat coup (round of play) has three possible outcomes: "player" (player has the higher score), "banker", and "tie". Each baccarat coup (round of play) has three possible outcomes: "player" (player has the higher score), "banker", and "tie". In baccarat, cards haveapoint value: the2through9cards in each suit are worth face value (in points); the 10, jack, queen, and king have no point value (i.e. are worth zero); aces are worth 1 point; jokers are not used. Hands are valued according to units digit of the sum of their constituent cards. For example,ahand consisting of2and3is worth 5, butahand consisting of6and7is worth3(i.e., the3being the units digit in the combined points total of 13). The highest possible hand value in baccarat is therefore nine. The dealer then deals out the cards face up—two each for the player and banker—and whichever hand totals closest to nine wins. If you’ve bet on the player hand and it has the closest to nine, the winnings are simply double what you bet. If you’ve bet on the banker hand and it wins, it pays 95 percent of your wager.When the cards dealt are greater than nine, you have to add the two together and drop the one (or two) to get the value. For example,ahand of nine and seven cards dealt would add up to 16, and with the first digit dropped, the value in the game is six. Here are some more rules to help you aceabaccarat game: If either the player or banker is dealtatotal of eight or nine, both the player and banker stand. If the player’s total is five or less, then the player will receive another card. Otherwise, the player will stand. If the player stands, then the banker hits onatotal of5or less. The final betting option,atie, pays out 8-to-1. Conveniently, there are also sheets at the table for you to keep track of your score. Persian Baccarat در حال مقایسه بازی کارتی است که بین دو دست "بازیکن" و "بانکدار" انجام شده است هر کودتای باکارات (دور بازی) سه نتیجه ممکن دارد: "بازیکن" (بازیکن امتیاز بالاتری دارد) ، "بانکدار" و "تساوی". هر کودتای باکارات (دور بازی) سه نتیجه ممکن دارد: "بازیکن" (بازیکن امتیاز بالاتری دارد) ، "بانکدار" و "تساوی". در باکرات ، کارتها دارای یک امتیاز هستند: کارتهای2تا9در هر لباس ارزش اسمی دارند (در امتیازات). 10 ، جک ، ملکه و پادشاه هیچ مقدار نقطه ای ندارند (یعنی ارزش صفر دارند) ؛ aces ارزش 1 امتیاز دارد. از جوکرها استفاده نمی شود عقربه ها براساس واحد رقمی از مجموع کارت های تشکیل دهنده آنها ارزیابی می شوند. به عنوان مثال ، عقربه ای متشکل از2و3ارزش5دارد ، اما عقربه ای متشکل از6و7ارزش3دارد (یعنی عدد3در مجموع نقاط ترکیبی 13 است).  بنابراین بالاترین مقدار دستی در باکارات9است. سپس فروشنده کارتها را رو به رو معاملات می کند - هر کدام دو بازیکن و بانکدار - و هر دست که نزدیک به9برد باشد. اگر روی دست بازیکن شرط بندی کرده اید و نزدیکترین رقم آن به نه است ، برنده ها دو برابر بیشتر از شرط بندی شما هستند. اگر روی دست بانکدار شرط بندی کرده باشید و برنده شود ، 95 درصد دستمزد شما را پرداخت می کند. وقتی کارت های فروش بیش از9کارت باشد ، باید دو را با هم جمع کنید و یکی (یا دو) را کنار بگذارید تا ارزش را بدست آورید. به عنوان مثال ، یک دست نه کارته و هفت کارته به 16 عدد می رسد و با افت اولین رقم ، ارزش بازی شش عدد است. در اینجا چند قانون دیگر برای کمک به شما در بازی باکارات وجود دارد: اگر در مجموع هشت یا نه بازیکن به بازیکن یا بانکدار داده شود ، بازیکن و بانکدار ایستاده اند. اگر مجموع بازیکن پنج یا کمتر باشد ، بازیکن کارت دیگری دریافت می کند. در غیر این صورت ، بازیکن ایستاده است. اگر بازیکن بایستد ، در اینصورت بانکدار در مجموع5ضربه یا کمتر می زند. گزینه نهایی شرط بندی ، تساوی ، 8 بر 1 نتیجه می دهد. به راحتی ، برگه هایی نیز در جدول وجود دارد که شما می توانید نمره خود را ثبت کنید. Myanmar Baccarat သည်ကစားသမားနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်နှစ် ဦး အကြားကစားသည့်ကဒ်ဂိမ်းကိုနှိုင်းယှဉ်သည်။ ဘက္ကရက်အာဏာသိမ်းမှု (ကစားပွဲ) တွင်ရလဒ် (၃) ခုရှိသည်။ ဘက္ကရက်အာဏာသိမ်းမှု (ကစားပွဲ) တွင်ရလဒ် (၃) ခုရှိသည်။ Baccarat တွင်ကဒ်များသည်တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝတ်စုံတစ်ခုစီတွင် ၂ မှ ၉ ကဒ်များသည်တန်ဖိုးတန်ဖိုးများဖြစ်သည် (အချက်များတွင်); 10, ဂျက်, မိဖုရားနှင့်ရှငျဘုရငျကို (ဆိုလိုသုညတန်ဖိုးရှိများမှာ) အဘယ်သူမျှမမှတ်တန်ဖိုးကိုရှိသည်ဖြစ်။ , အေ့စ် 1 မှတ်တန်ဖိုးရှိပါ၏ ပြက်လုံးများကိုမသုံးပါ သူတို့ရဲ့လက်ကျန်ငွေကဒ်ပြားရဲ့ကိန်းဂဏန်းအရလက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂ နှင့် ၃ တို့ပါ ၀ င်သောလက်သည် ၅ ကျသင့်သည်၊ သို့သော် ၆ နှင့် ၇ တို့ပါ ၀ င်သောလက်သည် ၃ ကျိုးနပ်သည်။ ထို့ကြောင့် baccarat တွင်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောတန်ဖိုးမှာကိုးဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည်ကဒ်ပြားများနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ကစားသမားနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်နှစ် ဦး စီကိုလက်လွှဲပေးပြီးအနိုင်ပေးကိုးခုနှင့်အနီးစပ်ဆုံးဘယ်လက်ကိုမဆိုလက်လွှဲပေးသည်။ သငျသညျကစားသမားလက်ပေါ်မှာအလောင်းအစားပါတယ်နှင့်ကိုးအနီးစပ်ဆုံးရှိပါတယ်လျှင်, အနိုင်ရရိုးရှင်းစွာသင်အလောင်းအစားထက်နှစ်ဆဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွင်လောင်းပြီးနိုင်လျှင်၎င်းသည်သင်၏လောင်းကြေး၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးသည်။ ကဒ်များသည်ကိုးခုထက်ပိုသည်နှင့်တန်ဖိုးကိုရရန်နှစ်ခုကိုအတူတကွပေါင်းထည့်ပြီးတစ်ခု (သို့မဟုတ်နှစ်ခု) ကိုဆွဲချရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကိုင်ဆောင်ထားသည့်ကဒ်ကိုးခုနှင့်ခုနစ်ခုလက်က ၁၆ ခုအထိပါလိမ့်မည်၊ ပထမဆုံးဂဏန်းကျဆင်းသွားပါကဂိမ်း၏တန်ဖိုးမှာ ၆ ဖြစ်သည်။ သင်တစ် ဦး Baccarat ဂိမ်းကိုကူညီဖို့ကူညီရန်နောက်ထပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဒီမှာ: အကယ်၍ ကစားသမား (သို့) ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ကိုရှစ်ယောက်ကိုးယောက်အားပေးခဲ့လျှင်ကစားသမားရောဘဏ်သမားပါပါရပ်တည်နိုင်သည်။ ကစားသမား၏စုစုပေါင်းသည်ငါး (သို့) ထိုထက်နည်းလျှင်ကစားသမားသည်အခြားကဒ်ရရှိလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကစားသမားရပ်လိမ့်မည်။ ကစားသမားသည်ရပ်လျှင်, ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်စုစုပေါင်း5သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအပေါ်ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ဆုံးအလောင်းအစားရွေးချယ်နိုင်သည့်လောင်းကြေးက ၈ -၁ သို့ ၁ ဆပေးသည်။ အဆင်ပြေစွာသင်သည်သင်၏ရမှတ်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အစားပွဲမှာစာရွက်များလည်းရှိပါတယ်။
😍😍😍I get 100likes😍😍😍very happy
am i the first? if i bet 1 eos it will go insane 😂
Destiny postedatopic in Show Off Your Wins
Many people say that Hilo isascam, but not for me. Takealook when you feel good, try to hitasmall presentation and the booomm payout will be surprising!